६ जना गर्भवती युवती लिएर साथीको बिहेमा पुगेका युवकले भने–‘यी सबै बच्चाको बाउ म हुँ’ - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
काठमाडौं। बिहे चलिरहेका बेला बिहे समारोहमा एक जना युवक आए । उनको साथमा ६ जना युवती थिए र ती सबै गर्भपती थिए । ती युवकले ती सबै ६ युवतीको पेटमा हुर्किरहेका बच्चाको पिता आफू रहेको बताए । प्रिटी माइक नामका यी व्यक्ति अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा छाएका छन् । उनका तस्वीर सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेका छन् ।
बेलायती अखबार द सनका अनुसार प्रिटी माइउक नाइजेरियाका अुन् र उनी प्लेब्वायको रुपमा चर्चित छन् । यसअघि पनि उनको बेलाबेलामा निकै चर्चा भएको थियो । २०१७ मा महिलाहरुको आपत्तिजनक फोटो पोस्ट गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ पनि परेका थिए । अहिले उनी ६ जना गर्भवती युवती लिएर आफ्ना एक साथीको बिहेमा पुगेका थिए ।
उनका साथी विलियम्स उचेम्बाको बिहे कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी ६ जना गर्भवती युवती लिएर गएका थिए । उनी यसरी गएपछि बिहेमा बेहुला बेहुली भन्दा प्रिटी धेरै चर्चामा रहे । सामाजिक संजालमा प्रिटी माइकले आफूले सबैभन्दा राम्रो जीवन बाँचिरहेको र यो कुनै अभिनय ट्रिक नभएको बताएका छन् । इन्स्टाग्राममा केहीले उनले बिहेमा सबै चर्चा बटुलेर बेहुला बेहुलीको मजा खराब गरिदिएको भनेका छन् । प्लेब्वायका रुपमा चर्चित माइक आफ्ना यस्ता तस्वीर सामाजिक संजालमा पोस्ट गरिरहन्छन् । इन्स्टाग्राममा उनका ३ लाखभन्दा धेरै फलोअर छन् ।
धुमपान गर्नेलाई कोरोना हुने सम्भावना कम ! कस्लाई छ त बढी खतरा ?
९ वर्षका बालक जोे आफ्नै कमाइले अर्बपति बनेः वर्ष मात्र कमाए २७ अर्ब